USolwazi Vincent Nyamori.
UDkt Vincent Nyamori wafika ethimbeni leKhemistri lasophikweni oluse-Westville esemncane ezofundisa ngowezi- 2008, efika ephuma ekubeni ngumcwaningi iminyaka emibili e-University of the Witwatersrand.
Namuhla ngowezi-2021, uNyamori usengusolwazi ogcwele e-UKZN, wethula nesifundo sesikhumbuzo sokuqala!
UNyamori odabuka eKenya, lapho ethweswa khona i-BSc in Physical Sciences zase-Egerton University ngowe-1996 ngaphambi kokuyokwenza i-Onazi ye-BSc in Chemistry e-University of Port Elizabeth (ngowe-1999), walandelisa ngeMastazi kwiSayensi (ngowezi-2001) neziqu zobudokotela kwiKhemistri (ngowezi-2006), ayethweswa yi-Nelson Mandela Metropolitan University.
Kusukela efika ukuzofundisa e-UKZN, usedlondlobele kakhulu. ‘U-Vincent ubambe iqhaza elikhulu ekuphathweni kweSikole neSikhungo,’ kusho iDini neNhloko yeSikole seKhemistri neFiziksi uSolwazi Ross Robinson.
‘Ubeyilungu lamakomiti amaningi e-UKZN. Phakathi kweminye imisebenzi, wake waba nguMholi weZifundo kwi-Analytical ne-Physical Chemistry ngowama-2012 wadidiyela i-UKZN Nanotechnology Platform kusukela ngowezi-2014.’
Ngowezi-2011, uNyamori waklonyeliswa nge-Vice-Chancellor’s Research Award, kwathi ngowezi-2018 wabalwa kwi-Top 30 Published Researchers yase-UKZN.
Ngonyaka odlule uthole indondo i-Merck Medal enikwa umbhali omkhulu wephepha elishicilelwe e-South African Journal of Chemistry emkhakheni othile wekhemistri nokwabonakala ukuthi ube neqhaza elimqoka emkhakheni ngesikhathi esithile.
Ukuhlonipha amagalelo akhe ocwaningo, wenziwa i-Fellow of the Royal Society of Chemistry (e-UK) ngowezi-2019 ne-Fellow of the South African Chemical Institute (eNingizimu Afrika) ngowezi-2020.
UNyamori, owaba ngumongameli we-South African Chemical Institute kusukela ngowezi-2017 kuya kowezi-2019, waba nguSihlalo we-Organising Committee wengqungquthela ye-NanoAfrica eyayise-Salt Rock ngowezi-2018 noSihlalo we-Local Organising Committee we-5th International Union of Pure and Applied Chemistry (i-IUPAC) Green Chemistry Conference eyayiseThekwini ngowezi-2014.
Kumanje unguSihlalo we-Scientific Organising Committee we-Commonwealth Chemistry Congress ezoba se-Trinidad and Tobago ngonyaka ozayo.
UNyamori useluleke abafundi abenza ucwaningo kwezobudokotela ebayi-11 PhD nabayi-12 abenza iMastazi abathweswe iziqu kanti kumanje weluleka abanye abayi-11 abenza iziqu zobukokotela nabathathu abenza iMastazi. Useshicilele amaphepha ocwaningo angama-136 abuyekezwe ngabalingani bakhe, izahluko ezimbili zezincwadi, igunya elilodwa, wacashunwa izikhathi eziyizi-2 199 kuze kube manje.
UNyamori usebenzise ithuba lesifundo sakhe sokuqala ukugxila kwi-ferrocene nekhemistri eyonga imvelo nasothandweni nakwiqhaza lakhe ocwaningweni le-nanotechnology.
‘Izinto ezinhle ezenzeka kwi-nanotechnology zisiza kakhulu ukuphucula nokushintsha imikhakha eminingi yezobuchwepheshe neyokusebenza,’ kusho uNyamori. ‘Lezizinto, zihambisana nekhemistri eyonga imvelo, ziyinsika ye-United Nations 17 Sustainable Development Goals (amaSDG).
‘Izinto ze-nanotechnology nezakhi zazo zibe neqhaza elibalulekile ekulawuleni ama-SDG, ikakhulukazi ekuhlinzekeni ngamanzi ahlanzekile, imvelo ehlanzekile nobuchwepheshe bamandla kagesi bedolobha lesimanje.
‘Iqhaza lethu lihlanganisa ukwenza izindlela ezintsha ezonga imvelo ngaphansi kwezimo ezingabangi ukuqwala.
UNyamori uphethe isifundo sakhe ngokubonga bonke abamesekile kulolu hambo lwakhe olumnandi.
IPhini LeSekelashansela neNhloko yeKolishi leZolimo, EzobuNjiniyela neSayensi uSolwazi Albert Modi ubonge uNyamori ngeqhaza lakhe elikhulu eNyuvesi.